Sehatra fitantanana salonista spa sy salon: fanendrena, fanatobiana entana, marketing, karama ary maro hafa | Martech Zone
Salonista dia rindrambaiko salon izay manampy spa sy salon amin'ny fitantanana ny karama, ny faktiora, ny firotsahana ny mpanjifanao ary ny fampiharana ny paikadim-barotra. Anisan'izany ny:
Fametrahana fanendrena ho an'ny spa sy salon
Famandrihana an-tserasera - Amin'ny alàlan'ny rindrambaiko famandrihana Salonista an-tserasera an-tserasera, ny mpanjifanao dia afaka mandahatra, mametra, na manafoana fotoana nifanaovana na aiza na aiza misy azy ireo. Samy manana ny fahaizan'ny tranokala sy ny rindrambaiko azo ampidirina miaraka amin'ny haino aman-jery sosialy Facebook sy Instagram. Miaraka amin'izany, mandeha ho azy tanteraka ny fizotran'ny famandrihana. Tsy misy famandrihana indroa. Veloma amin'ny tsy fampisehoana miaraka amin'ny Salonista.
Slot Blockers - Atsaharo ny fandanianao fotoana amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanomezana fotoana tsy misy amin'ny kalandrie. Miaraka amin'ireo sakana slot ho an'ny famandrihana an-tserasera dia azonao atao ny mampiseho ny misy tsy misy ihany, izay mametra ny famandrihana fotoana be loatra ao anatin'ny fe-potoana manokana.
Famandrihana ora tsy ara-potoana - Omeo fahalalahana bebe kokoa amin'ny mpanjifanao ny fotoana voatondro amin'ny famandrihana, na dia any ivelan'ny orinasa aza, amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko fitantanana. Miaraka amin'ny rindrambaiko salon tsara indrindra, afaka mihetsika hatrany ny orinasanao na dia ivelan'ny Internet aza ianao. Salonist dia natao hitazomana ny fidiran'ny mpanjifanao tsy tapaka, raha toa ka mamandrika tsara amin'ny fotoana rehetra sy amin'izay toerana misy azy ireo izy ireo.
Famandrihana fonosana - Ankafizo ny fahalalahana mamorona fonosana ho an'ny serivisy isan-karazany amin'ny fehezam-boninkazo mety. Amin'ity rindrambaiko fitantanana mpanjifa ity dia azonao atao ny mampitombo ny varotra sy ny fidiram-bola ao amin'ny studio-nao amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fametrahan'ny mpanjifa famandrihana arakaraka ny safidiny. Ny rindrambaiko salonista salonista dia tsara koa amin'ny fampitomboana ny tsy fivadihan'ny mpanjifanao amin'ny fonosana salon seamless eo am-pelatanany.
Famandrihana ho mpikambana - Omeo famporisihana ny mpanjifanao hijanona ho mahatoky amin'ny fampiasana ny fisoratana anarana amin'ny maha-mpikambana sy amin'ny fandaharam-potoana. Ao amin'ny Salonist, ny tompona salon dia afaka mitantana programa mahatoky izay manome fihenam-bidy ho an'ny mpikambana amin'ny serivisy manokana. Voaporofo izany fa mitarika fitomboan'ny salon ary mampiakatra ny tahan'ny fitazonana ny mpanjifa.
Ekeo ny fandoavam-bola - Ahoana ny fahagagana raha manana ny rindrambaiko salon tsara indrindra izay mahatonga ny fanekena ny fandoavana ho rivotra? Salonista dia tonga miaraka amin'ny Widget famandrihana an-tserasera mifandraika amin'ny Paypal, Stripe, ary Authorize.Net. Ny tompona salon dia afaka mahazo fandoavam-bola amin'ny serivisinao amin'ny fampifanarahana tsotra izao ny fividianana an'ity widget ity amin'ny rindrambaiko fitantanana salon anay. Azonao atao ihany koa ny manaiky ny endrika fandoavam-bola amin'ny Point of Sale.
Marketing ho an'ny spa sy salon
mailaka Marketing - Mandefa fiarahabana tratry ny tsingerintaona, drafitra ho mpikambana, ary fanamafisana ny fanendrena ao anatin'ny dimy minitra raha tsy mampiasa serivisy marketing mailaka an'i Salonist. Ny marketing amin'ny mailaka dia fomba tsara hanatsarana ny fotoana voatondro ho an'ny serivisy salon sy spao. Ny salonista dia momba ny fanatsarana ny tahan'ny fitazonana ny mpanjifa sy ny fampidiram-bola avo kokoa ho an'ny orinasanao.
Review Management - Ny fanamarihana dia fomba mahafinaritra iray hanehoana amin'izao tontolo izao fa manao zavatra tsara ianao. Manampy anao hiantoka mpanjifa bebe kokoa izany ary hitazona azy ireo ho mahatoky. Rindrambaiko fandaharam-potoana amin'ny fandaharam-potoana amin'ny salonista dia ahafahanao mahazo valiny mivantana amin'ny mpanjifanao momba ny vokatrao sy ny serivisinao. Miaraka amin'ny bitsika nalefa tamin'ny alàlan'ny SMS sy mailaka tamin'ny finday avo lenta ho an'ny fitantanana mpanjifa sahaza azy ireo dia afaka mifandray amin'ny mpanjifanao ianao.
Fitantanana ny tapakila - Raha misy zavatra tian'ny mpanjifa dia serivisy maimaim-poana izany. Valio ny mpanjifanao amin'ny fiadanany amin'ny tolotra fihenam-bidy sy tapakila amin'ny baiko fanavaozana rehetra. Tsy misy dingana sarotra tafiditra ao. Azonao atao ny mitantana an'io zony io avy amin'ny takelaka Generate Salon sy Spa Discount amin'ny rindrambaiko salama salama. Tazomy ny mpanjifanao miditra miaraka amin'ny fihenam-bidy.
Gift Cards - Omeo ny mpanjifanao fanomezana ny olon-tiany amin'ny serivisinao amin'ny fotoana manokana. Na tsingerintaona na fankalazana fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ny karatra fanomezana natokana ho an'ny Salonist dia afaka manampy anao hirotsaka amin'ny mpanjifa mety. Mampahafantatra azy ireo avy hatrany ny sehatra amin'ny alàlan'ny mailaka na SMS.
Rafitra fahatokisana - Ny programa tsy fivadihana amin'ny alàlan'ny fitantanana ny mpanjifa dia rafitra valisoa lehibe hafa ho an'ny mpanjifanao. Hanampy amin'ny fanatsarana ny fahita matetika amin'ny fitsidihan'izy ireo izany. Zahao ny rindrambaiko Salonist raha te hahita mora amin'ny programa tsy fivadihana ianao izay hanatsara ny referralin'ny mpanjifa, ny firotsahana ary ny fiarovana anao.
Fanentanana amin'ny SMS - Ahenao ny mety tsy fisian'ny fampisehoana avy amin'ny mpanjifanao. Manampy anao hifandray amin'izy ireo ny salonista amin'ny alàlan'ny fampahatsiahivana fanendrena, fandraisana anjaran'ny mpanjifa, fanentanana fampiroboroboana, sns. Ampitomboy ny orinasanao salon amin'ny alàlan'ny resadresaka ifanaovana amin'ny mpanjifanao sy ny fahafantarana izay tena tadiaviny.
Ho fanampin'ny fametrahana toerana sy marketing, Salonista misy koa ny fitantanana ny mpanjifa, ny fanendrena mialoha, ny fitantanana ny lisitra, ny fitantanana ny fandaniana, ny fitantanana ny toerana, ny fivarotana an-tserasera, ny analytics, ny toerana amidy, ny fampiharana finday, ny endrika an-tserasera ary ny tatitra amin'ny antsipiriany. Ity rindrambaiko salon ity dia mifanaraka amin'ny zavatra rehetra ilainao mba hampitomboana ny vola miditra, hitsitsiana fotoana, hanatsarana ny fahitana ny marika, ary handray fanapahan-kevitra hendry amin'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy. Topazo maso ireo fiasa amin'ity fitaovana ankafizinao indrindra ity ary miomàna hanatsara ny orinasanao.
Manomboka amin'ny salonista
Ny mpanjifa dia misy fivarotana mpanety, salon volo, mpitsabo mpanotra, salon fantsika, spaoro, salon de bridal, rindrambaiko spa spa, skincare estetika, mpanefy tatoazy, mpanofa booth, salle tanning, ary mpiompy biby.
Manomboka amin'ny fitsapana maimaimpoana
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i Salonista.
Tags: skincare estetikaAnalyticstoerana fanendrenafivarotana mpanetympanofa tranohevasalona mpanambadyfitantanana ny mpanjifafitantanana ny fandanianasalantsala vololisitra fitantananafitantanana ny toeranampitsabo aretim-bokatrarindrambaiko spa fitsaboanafampiharana findaysalon hohoendrika an-tseraserafivarotana an-tseraserampiambina bibytoerana amidyposfanendrena mialohamarketing amin'ny salonSpasfananganana salonsmpanakanto tatoazy
Influ2: Sehatra fanaovana dokambarotra ho an'ny olona (ABM)